Fahaketrahana amin'ny vanim-potoana - Famaritana, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny fararano no fotoana mahakivy indrindra amin'ny taona. Fa maninona Toa mahazo loko mamirapiratra ny zava-drehetra manodidina, mamela crunch ambany tongotra, lasa tsy dia mafana loatra ary azonao atao ny mandray am-pifaliana ny taratrao amin'ny puddles. Saingy tsy ny rehetra no faly amin'ity natiora ity, ary mampahory ny sasany aza.
Ny toe-piainana voajanahary ihany ve no misy fiantraikany amin'ny toe-tsaina rehefa fararano? Fa maninona no ny fahakiviana amin'ny vanim-potoana no heverina ho be mpampiasa? Inona avy ireo anton-javatra misy fiantraikany amin'ny fisehoany ary inona ny fomba fiatrehana izany? Voalohany, mila jerenao ny atao hoe fahaketrahana.
Araka ny diksionera manazava, ny famoizam-po dia toe-javatra ahafantarana ny fikorontanan-tsaina. Ny tsy fahombiazan'ny toe-po sy ny angovo, ny olana amin'ny torimaso, ny tebiteby, ny tsy firaikana, ny fihenan'ny fahatokisan-tena ary ny eritreritra matetika hamono tena dia mety hanondro ny fisian'ny fahaketrahana.
Na izany aza, amin'ny toe-javatra sasany, ny fanjakana toy izany dia mety ho fihetsika tsy maharitra ihany amin'ny tranga fiainana samihafa. Ny famoizam-po amin'ny foto-keviny dia matetika maharitra roa herinandro farafahakeliny ary azo maharitra, efa mifindra ao amin'ny sokajin'ny aretina ara-tsaina.
Fotoana mety hihombo
Raha ny antontan'isa dia 40% ny olona tratry ny famoizam-po amin'ny vanim-potoana, ary vehivavy ny antsasak'izy ireo. Iray amin'ireo antony lehibe mahatonga izany tahirin-kevitra izany, ny dokotera dia miantso ny fotoanan'ny tetezamita. Amin'ny fararano dia mihafohy ny andro, noho izany ny vatana dia tsy manana hazavana ampy.
Misy tsy fahombiazana amin'ny famokarana ny hormonina matory (melatonin) sy ny hormonina fifaliana (serotonin). Antony iray hafa mahatonga ny fisehoan'ny fahaketrahana amin'ny fararano ny fihenan'ny vitamina mahery ao amin'ny vatana, azo tamin'ny alàlan'ny sakafo.
Ny fisehoan'ny manga, ankoatry ny fisiolojika sy ny voajanahary, dia mety hisy fiantraikany amin'ny traikefa sasany. Rehefa dinihina tokoa, ny fararano koa dia fotoana famaranana ny fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra, fotoana famintinana ny valiny alohan'ny taona vaovao, ny vanim-potoana fanovana ny endrika fitafiana, sns. Amin'ny vehivavy, ny antony hormonina sy ny enta-mavesatra roa (asa ao an-trano miampy ny asa) no asiana an'izany rehetra izany.
Ny famantarana mahazatra ny famoizam-po amin'ny vehivavy sy ny lehilahy dia mitovy. Na izany aza, ny fisehoany amin'ny vehivavy dia aseho, amin'ny fitsipika iray, amin'ny toetra ketraka sy ketraka, raha ho an'ny lehilahy ketraka kosa, ny fisehoan'ny fahasosorana sy ny hatezerana dia toetra mampiavaka azy.
Amin'ireo soritr'aretin'ny fahaketrahana amin'ny fararano dia matetika no miavaka ireto manaraka ireto:
manga, tsy fisian'ny toe-po;
pessimism sy alahelo;
tsy fahampian'ny fahalianana amin'ireo hetsika ankafizinao teo aloha;
tsy fahitan-tory sy torimaso;
nihena ny fahatokisan-tena;
Na dia ny fiheverana ny mety ho fetran'ireto soritr'aretina ireto aza dia tokony hatomboka aloha araka izay tratra ny ady aminy mba hisorohana ny fivoaran'ny endrika famoizam-po mafy kokoa. Ho azy, toy ny aretina rehetra, dia mila fitsaboana ara-potoana.
Amin'izao androntsika izao dia diso ny finoana an'izany fahaketrahana Aretina izay nihanaka tato ho ato. Raha ny marina, na dia tamin'ny andro taloha aza, ny soritr'aretina dia nitantara mitovy amin'izany.
Noho izany, Hippocrates indray mandeha dia nanome azy ireo ny anarana "melankoly" ary nanambara fa ny toetry ny marary dia miankina amin'ny vanim-potoana sy ny toetr'andro ary koa ny tara-pahazavana ampy dia misy vokany manasitrana. Hatramin'izao, ny phototherapy no mbola fomba lehibe indrindra hiatrehana ny fahaketrahana amin'ny fararano.
Mba hanampiana ny vatanao hiatrika ny fahaketrahana irery dia tsy maintsy manaraka fitsipika 5 ianao:
Fahazarana isan'andro mazava - tsy mifoha maraina sy tara fatoriana.
Sakafo misy vitamina sy serotonine avo lenta (fromazy, sôkôla, aviavy, akondro, voankazo sy legioma hafa).
Fomba fiainana mavitrika (mandeha an-tongotra, fanatanjahan-tena, fampihetseham-batana, sns.).
Fampisehoana ivelany mety.
Mahazoa fihetsem-po tsara tsy tapaka.
Enti-miady amin'ny fararano manga dia izao no nanolorana anao:
afindra amin'ny maraina ny fihinanana dite sy kafe, soloina ranom-boankazo amin'ny maraina, ary ronono na kakao mafana amin'ny hariva;
mampiasa vokatra manitra citrus ho an'ny fandroana maraina;
mandehana antoandro raha antoandro;
hampihena ny maha irery anao, misafidy teatra sy sinema, fiaraha-misakafo amin'ny fianakaviana, fihaonana amin'ny namana ary fialamboly hafa amin'ny fialamboly;
omeo ny lokon'ny loko mamirapiratra rehefa mifidy akanjo sy ao afovoan-trano;
mahita fialamboly mahasoa vaovao, ohatra, yoga.
Tokony ho tsaroana fa ny soritr'aretina rehetra amin'ny famoifoizana vanim-potoana dia afaka manondro ny fisian'ny aretina isan-karazany. Noho izany dia ilaina ny mitady ny torohevitry ny manam-pahaizana manokana. Indrindra amin'ny faharetan'ny manga sy ny tsy fisian'ny fanatsarana.
Manaova fararano mahafinaritra sy toe-po tsara!
Fahaketrahana aorian'ny fiterahana: soritr'aretina, famantarana, antony
Antony sy famantarana, ambaratonga fahaketrahana
Fanatanjahan-tena fitsaboana mifantoka amin'ny vatana: ho an'ny fanafihana mikorontana, ho an'ny famoifoizana
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 33,278.